सञ्जिब बगाले/रोहेज खतिवडा भरतपुर, साउन २०
भरतपुर-१९ का तीन मतदान केन्द्रमा शुक्रबार पुन: मतदान भएको छ। गत वैशाख ३१ गते भएको चुनावको मतगणना क्रममा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि यो वडामा पुन: मतदान भएको हो।
कांग्रेसको पकड क्षेत्र रहेको भरतपुर-१९ मा फेरि चुनाव भयो भने कांग्रेस समर्थक मतदाताको थप मत आफ्नो पक्षमा बढाउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षासाथ माओवादी केन्द्रले मतपत्र च्यातेको थियो। के माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेदवार‌ रेणु दाहालले शुक्रबारको मतदानपछि भरतपुर महानगरको चुनावी परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्लिन्?
हामीले यही प्रश्नको उत्तर खोज्न पुन: मतदान हुनु दुई दिनअघि बुधबार र बिहीबार भरतपुर-१९ का मतदाता र राजनीतिक नेता/कार्यकर्तासँग भेटेर कुरा गर्यौं। दुई दिनको भेटघाट र कुराकानीका आधारमा हामीले यो विश्लेषण लेखेका छौं।
पछिल्लो परिस्थितिको विश्लेषणमा जानुअघि जेठ १५ गते राति मतपत्र च्यातिनुअघिको मतगणना परिणाम हेरौं।
भरतपुर महानगरका २९ वडामध्ये २७ वटा वडाको मत गन्दा एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले ४० हजार ९ सय ८० मत पाएका थिए भने रेणु दाहालले ४० हजार १ सय १६ मत पाएकी थिइन्। देवीले ८ सय ६४ मतको अग्रता लिइरहेका थिए।
त्यसपछि १९ र २० नम्बर वडाको मात्र मत गन्न बाँकी थियो। यसमध्ये १९ नम्बर वडामा खसेका २ हजार ८ सय ९७ मतमध्ये १ हजार ८ सय गनिसक्दा देवीको अग्रता ७ सय ३४ मा झरेको थियो। यी दुवै वडाको बाँकी मत गन्दा रेणुले नजित्ने देखेपछि माओवादीले मतपत्र च्यातेको थियो। शुक्रबार मतदान सकिएपछि १९ र २० नम्बर वडाको मत गन्दा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न रेणुले देवी ज्ञवालीभन्दा कम्तिमा ८ सय ६५ मत धेरै ल्याउनुपर्छ।
रेणुले यसपालि यति धेरै मतअन्तरले देवीलाई पछि पार्लिन् वा उल्टो देवीले सहानुभूतिको मत पाएर मतअन्तर बढाउलान्?
हामीले जति मतदातासँग कुरा गर्यौं, त्यस आधारमा भन्दा देवीले सहानुभूतिको मत पाउने सम्भावना कम छ।
हामीले भेटेका मतदातामध्ये कसैले पनि 'गत चुनावमा रेणुलाई भोट हालेको थिएँ, यसपालि देवीलाई दिन्छु' भनेनन्। अर्थात्, मतपत्र च्यातेबापत रेणुलाई दण्डित गर्ने मतदाता हामीले भेटेनौं। त्यही भएर अस्तिको चुनावमा छुटेका एमाले समर्थक मतदाताबाहेक अरुको मत देवीको पक्षमा बढ्ने कम सम्भावना छ।
अब प्रश्न रेणु दाहालले मत बढाउँछिन् वा बढाउँदिनन् भन्ने हो।
दाहालले पछिल्ला दुई महिना भरतपुरमै अड्डा जमाएर बसेकी छन्। यहाँका अधिकांश जनताले हिजो दाहाललाई चिनेका थिएनन्। चितवनकै भए पनि यहाँ उनको राजनीतिक लगानी थिएन। बरू देवी ज्ञवालीलाई यहाँका मतदाताले नजिकबाट चिनेका थिए। उनी २०५४ सालमै भरतपुर नगरपालिकाको उपमेयर निर्वाचित भएका थिए।
तर, यी दुई महिनाका अधिकांश समय दाहालले यहाँ बिताएकी छन्। सबै मतदाताको घरघरमा कम्तिमा दोहोर्‍याएर पुगेकी छिन्। उनी 'सरल र सहज’ रुपमा मतदाताबीच प्रस्तुत भएकी छन्।
सेतोपाटीसँग कुरा गरेकी मतदाता लक्ष्मी तामाङले बैशाख ३१को निर्वाचन अघि रेणु दाहाललाई देखेकी पनि थिइनन्। तर अब तामाङले दाहाललाई आफ्नै आंगनमा दर्जनौं पटक देखिसकिन्। धेरै पटक दाहालका कुरा सुनिसकिन्।
'अब धेरैले उसलाई भोट दिन्छ,' तामाङले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'पहिला रेणुलाई यहाँ कसैले चिनेको थिएन, अहिले त सयपटक आइसकिन् होला।'
हुन त यी दुई महिनामा दुवै मेयर उम्मेदवारले यही वडामा केन्द्रित रहेर आफ्ना गतिविधि गरेका छन्। उनीहरूले अधिकांश समय यहाँका मतदाता फकाउन नै बिताएका छन्।
स्थानीय मतदाता जयराम लामा भन्छन्, 'अब त मेयरका दुवै उम्मेदवारले सबै मतदाता भेटिसके। पछि उनीहरूले बाटोमा १९ नम्बरको मान्छे भेट्यो भने नाम त थाहा नहोला, तर कहाँ देखेको कहाँ देखेको भन्नेचाहिँ पक्कै हुन्छ।'
यस्तो निरन्तर भेटघाटले ज्ञवालीलाई भन्दा बढी फाइदा दाहाललाई नै पुगेको छ र बढी मेहनत पनि दाहालले नै गरेको देखिन्छ।
उनले जनताका माग र आवश्यकता सुनेकी छन्। मतदाताहरुले उनीसँग आमनेसामने बसेर 'बार्गेनिङ' गरेका छन्। उनले विकासको आश्वासन पनि दिएकी छन्। यसले हिजो रिसाएर मत नदिएका कांग्रेस समर्थक मतदाता मात्र हैन, देवी ज्ञवालीलाई भोट दिएका मतदातालाई पनि उनले तान्ने प्रयास गरेकी छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफू प्रधानमन्त्री छँदा चितवनका लागि 'विशेष प्याकेज' नै बनाएर करिब एक अर्ब बजेट पठाएका छन्। चितवन प्रदर्शनी केन्द्र, क्षेत्रीय रंगशाला निर्माणका साथै सडकमा यो बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुनेछ। उनकी पुत्री रेणुले यी दुई महिनामा यो सन्देश प्रत्येक मतदातामा पुर्याउने अवसर प्राप्त गरिन्।
उनी अधिकांश आमा समूहका बैठकमा पनि पुगेकी छन्। आफूले मेयर जितेमा कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गर्ने बचन दिएकी छन्। यहाँबाट केही मत प्रभावित पार्ने उनको हिसाब छ।
मतदातासँगको कुराकानीमा आमा समूह मार्फत भोट तान्न दाहालले गरेको मेहेनत प्रष्ट झल्किन्छ। हामीले कुराकानी गर्दा गुञ्जनगरकी मीना आलेले दाहाललाई आमा समूहको निर्णय कुरेर बसिरहेकी थिइन्। उनले भनिन्,' गाउँ विकास हुन्छ भन्ने आशले भोट दिने हो। यसपटक रेणुलाई हाल्ने भनेका छन्। तर, आमा समूहले के निर्णय गर्छ त्यसैमा भर पर्छ।'
आमा समूहमा योजना नै बनाएर दाहाल पुगेकी छन्। यसले मतदातामा केही न केही प्रभाव पार्छ।
दाहालका यी प्रयास हिजो मत नहाल्ने कांग्रेस समर्थक वा तटस्थ मतदाता फकाउन कति सफल हुन्छ त्यसमा पनि चुनावको परिणाम निर्भर गर्छ।
अर्को महत्वपूर्ण विषय नेपाली कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकले यसपालि रेणुलाई कति सहयोग गर्छन् भन्ने हो।
अघिल्लो पटकको चुनावको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि वडाध्यक्षमा कांग्रेसलाई भोट हालेका कतिपय मतदाताले मेयरमा रेणुको सट्टा देवीलाई भोट हालेको देखिन्छ।
वडा नम्बर १९को १८ सय मत गन्दा नेपाली कांग्रेसका वडाध्यक्षका उम्मेद्वार कणबहादुर गुरूङले ८ सय १८ मत ल्याएका थिए भने एमालेका उम्मेद्वार प्रकाश तामाङले ६ सय ५५ र माओवादीका उम्मेद्वार खड्गबहादुर गुरूङ १ सय ३५ मत ल्याएका थिए। कांग्रेस र माओवादीका वडाध्यक्षको मत जोड्दा ९सय ५३ हुन्छ। जब कि रेणुले १८ सय मत गन्दा रणुले ७ सय ९२ मत मात्र ल्याएकी थिइन्। यसको अर्थ वडाध्यक्षमा कांग्रेस र माओवादीलाई मत हालेका १६१ मतदाताले रेणुलाई मत दिएका थिएनन्।
बैशाख ३१को चुनावमा वडा नम्बर १९को १८ सय मत गन्दा देवी ज्ञवालीले पाएको मत र वडाध्यक्षका एमाले उम्मेद्वारले पाएको मत लगभग बराबर छ। १८ सय मतमा ज्ञवालीले ६ सय ६१ मत पाएका थिए भने वडाध्यक्षका उम्मेदवार तामाङले ६ सय ५५ मत पाएका थिए।
यसको अर्थ कांग्रेसको वडाध्यक्षलाई मत दिएका कतिपय मतदाताले देवी र रेणु दुवैलाई भोट दिएका थिएनन्।
आजको मतदानमा ती 'रूष्ट' कांग्रेस समर्थक मतदाताले रेणुलाई भोट हाल्छन् कि हाल्दैनन् भन्ने महत्वपूर्ण छ।
जेठ १४ देखि दुई महिना अवधिमा नेपाली कांग्रेसका नेता-कार्यकर्ताको आक्रोश धेरै शिथिल भएको छ।
नेपाली कांग्रेसकी उपमेयर उम्मेदवार पार्वती शाह माओवादीसँगको तालमेलबाट रिसाएका कांग्रेस कार्यकर्ताको आक्रोश मत्थर भएको बताउँछिन्। रिसाएका मतदाता फकाउन माओवादी र कांग्रेस नेताहरूले ठूलै कसरत गरेका छन्।
'पहिले त हाम्रा मतदातालाई माओवादीलाई कसरी भोट हाल्ने भन्ने भयो,' शाह भन्छिन्, 'तालमेलप्रति असन्तुष्टि मात्रै होइन, आक्रोश थियो। यहाँ महिला संघ जिल्ला कार्यालयमा अध्यक्षको मेरो नेमप्लेटसमेत फालिदिएका थिए। तर अब त्यस्तो अवस्था छैन।’
उनी मेयर उम्मेदवार दाहाललाई लिएर कांग्रेस मतदाताको घरघर पुगेकी छन्। मतदातालाई फकाउन सबै उपाय अपनाएकी छन्।
'रेणुजी र म सँगसँगै हिडेका छौं। १९ नम्बर वडाका लगभग सबै घर पुगेका छौं, सबै मतदाता भेटेका छौं। अब सबै उहाँलाई भोट दिन तयार हुनुभएको छ। मैले त उपमेयर जित्ने पक्का नै भइसकेको छ तर मेयरमा रेणुलाई जिताउन सकिएन भने हाम्रो उपमेयरलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ। मेरो लागि पनि उहाँहरू रेणुलाई भोट दिन राजी हुनुहुन्छ,' शाह भन्छिन्।
हिजो कांग्रेससँग रिसाएर रेणुलाई मत नदिने धेरै कार्यकर्ता ‘अनुशासित' भएका छन्।
शारदानगरका मतदाता मोहन गुरूङ नेपाली कांग्रेसका मतदाता हुन्। उनले बैशाख ३१मा मेयरमा देवी ज्ञवालीलाई भोट हालेको वा कसैलाई भोट नहालेको प्रष्ट भन्न चाहेनन्। तर उनले दाहाललाई भोट नहालेको कुरा भने स्पष्ट भने। यो पटक भने उनी आफूले आस्था राखेको पार्टीको निर्देशनअनुसार मेयरमा दाहाललाई नै भोट हाल्ने पक्षमा छन्।
'भरतपुरको विकास गर्ने हो भने रेणुलाई जिताउनु पर्छ भन्ने छ,' उनले भने, 'मेयर एमालेको अनि तल सबै कांग्रेसको भएर कांग्रेसले कसरी विकास गर्छ? पहिले त रेणुलाई दिएको थिइनँ तर अबचाहिँ दिने हो।'
मोहन गुरूङजस्ता मतदाता दाहाल र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले जति धेरै फकाउन सके, महानगरको मेयरसम्म पुग्ने दाहालको बाटो त्यति नै सहज हुनेछ।
१९ नम्बर नेपाली कांग्रेस बलियो भएको वडा हो। पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई २०७० को चुनाव जिताउन महत्वपूर्ण भोट यही वडामा खसेको हो। कोइरालाले छाडेपछि यहाँबाट रामकृष्ण घिमिरे उपचुनावमा निर्वाचित भए। तनहुँ, लमजुङ, गोर्खा र स्याङ्जाबाट झरेका गुरूङ, मगर र तामाङ समुदायको बाहुल्य यो वडामा छ। जसमध्ये धेरै नेपाली कांग्रेस समर्थक हुन्।
कांग्रेस समर्थक मतदातको यति धेरै उपस्थिति रहेको यो वडामा पनि गत चुनावको १ हजार ८ सय मत गन्दा रेणुले ७ सय ९२ मत ल्याएकी थिइन् भने देवीले ६ सय ६१ मत ल्याएका थिए।
यो वडामा देवीको यति धेरै मत आएको देखेपछि माओवादीले अतालिएर मतपत्र च्यातेको थियो। त्यसैले, कांग्रेससँगै ‘रिसाएका' कति मतदाता फर्किनेछन् भन्ने प्रश्न दाहालको जितका लागि महत्वपूर्ण छ। हाम्रो अनुमानमा कांग्रेसका केही मतदाता फर्किने छन्। रेणुले १९ नम्बर वडामा पहिलेभन्दा धेरै मत ल्याउने छिन्।
तर, पहिले पनि कांग्रेसको मत एमाले उम्मेद्वार ज्ञवालीलाई नगएको पृष्ठभूमिमा रेणुले आफूसँग रूष्ट कांग्रेसका मतदाता फर्काएर मात्रै परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न त्यति सजिलो हुनेछैन। अघिल्लो पटक दाहाललाई भोट नहालेका कांग्रेसका सबै मतदाता फर्किँदा पनि १९ नम्बर वडाको परिणामबाट ८ सय ६४ मत पुर्ति गर्न कठीन हुनेछ। त्यसका लागि उनले एमालेकै मत तान्नु पर्ने हुन्छ।
मतपत्र च्यातिएको घटना एमालेले आफ्ना मतदाता सुरक्षित राख्नैका लागि भए पनि पर्याप्त प्रचार गरेको छ। नयाँ मतदाता आर्जन गर्न नसके पनि माओवादीले मतपत्र च्यातेकै कारण एमाले मतदाता ज्ञवालीका पक्षमा एकढिक्का देखिन्छन्।
मतगणना गर्न बाँकी २० नम्बर वडामा कसको मत कति छ भन्ने अझै रहस्यकै विषय छ। दाहालले मेयरमा जित्नका लागि वडा नम्बर १९ मा पुर्ति गर्न नसकेको मत २० नम्बरले पुर्ति गर्नु पर्छ। त्यसो गर्न सकेमात्र अघिल्लो पटकको चुनावमा ज्ञवालीको पोल्टामा गइसकेको महानगरको मेयर उनले उल्ट्याउने छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २०, २०७४, ०८:०२:४०